တပည့်တော်များနှင့်နတ်ဆိုးများ | Disciples and Demons | Real Conversion
တရားဒေသနာကို ဒေါက်တာ R. L. Hymers, Jr. ကရေးသားပြီး
ဇူလိုင်လ ( ၂၂ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
ခရစ်တော်က သူ့တပည့်များကို ပေးထားသည့်သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တတိယ မြောက်လေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တန်းတွင် သူတို့နောက်သို့လိုက်ကြ သည်ဖြစ်၍ တပည့်တော်ကို မည်သို့သင်ကြားပေးသည်ကို ယနေ့ သင်ယူကြရမည်။
ယေရှုသည် ယနေ့၌ လူငယ်များကို သင်ကြားပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသည့်နည်း လမ်းဖြင့် သင်ကြားပေးသည်မဟုတ်။ ယေရှုက တပည့်တော်များကို သင်ကြားပေးသည့် နည်း လမ်းကို သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် အောင်မြင်သောသူ၊ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များက ဆုံးရှုံးသည်။ ယနေ့၌ မှားယွင်းသောအရာတစ်ခုမှာ တပည့် တော်ဖြစ်ဖို့ မသင်ပေးခင္ ပြောင်းလဲသူများဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ယေရှုက တပည့်တော်များကို သင်ကြားပေးရန် သုံးနှစ်လောက်အချိန်ယူရသည်။ သို့သော် ထို အချိန်သည် မပြောင်းလဲကြသေးသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။(ယောဟန် ၂၀း ၂၂၊ J. Vernon McGee နှင့် Thomas Hale တို့ကို ကြည့်ပါ။) ထိုအရာမှာ ယေရှုလုပ်ဆောင်သောအရာနှင့် ယနေ့ကျွန်တော်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ခြားနားချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားအဓိကခြားနားချက်မှာ ခရစ်တော်သင်ကြားပေးသော သင်ခန်းစာထဲတွင်ရှိပါ သည်။ အစတွင် ယေရှုက သူတို့ကိုခေါ်ပြီး “လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေမည်” ( မာကု ၁း ၁၇ )) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် သင်ကြားပေးသည်။ ယင်းမှာ သူတို့ သည် အခြားသူများ တပည့်တော်ဖြစ်လာစေနိုင်ရန် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက သူ၏ပိုင်းတိုင်သည် အစတွင်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်သည် လည်း အစ၌ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်က ဒီမှာရောက်နေတာ ဥပုဒ်နေ့ကျောင်းများကဲ့သို့ ကျမ်းစာ ပုံပြင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်၏ပန်းတိုင်မှာ သင်တို့သည် ဝိညာဉ်ဖမ်းသူ၊ အခြားသူများ လဲ ယေရှုနောက်လိုက်များဖြစ်လာစေရန်၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကို ရရှိရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ် တော်က ထိုအကြောင်းကို အစအဦး၌ မိန်းဆိုထားပါသည်။ ( မာကု ၁း ၁၆-၂၀ ကို ကြည့်ပါ။ )
ယေရှုခရစ်က သူတို့ကို ဒုတိယအကြိမ်သင်ကြားပေးသောအရာမှာ စာတန်နှင့်နတ်ဆို များကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ဟူသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ မာကု ၁း ၂၁-၂၇ ကို ကြည့်ကြပါ စို့။
“ကပေရနောင်မြို့သို့သွားကြလျှင်၊ ဥပုသ်နေ့၌ ကိုယ်တော်သည် ချက်ခြင်း တရားစရပ်သို့ဝင်၍ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။ ပရိသတ် တို့သည်လည်း ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကို အလွန်အံ့ဩကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကျမ်းပြုဆရာနည်းတူမဟုတ်၊ အစိုးရသောသူ နည်းတူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။ ထိုသူတို့၏တရားစရပ်၌ ညစ် ညူးသောနတ်စွဲသောသူရှိ၍၊ ဪ နာဇရက်မြို့သားယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ အ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းဌါလာသလော။ ကိုယ်တော်သည် အ ဘယ်သူဖြစ်သည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်း တော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟု ဟစ်ကြော်လေ၏။ ယေရှုကလည်း တိတ်ဆိတ်စွာနေလော့။ထိုသူ၏အထဲက ထွက်သွားလော့ဟု ဆုံး မတော်မူလျှင်၊ ညစ်ညူးသောနတ်သည် ထိုသူကို တောင့်မာစေပြီး မှ၊ ကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍ထွက်သွား၏။ လူအပေါင်းတို့ သည် မိန်းမောတွေဝေ၍၊ ဤအမှုသည် အဘယ်သို့နည်း။ ဤဆုံးမ ခြင်းအသစ်သည် အဘယ်သို့နည်း။ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကိုပင် အာဏာနှင့်မှာထား၍၊ သူတို့သည် နားထောင်ကြသည်တကားဟု အချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။” ( မာကု ၁း ၂၁-၂၇ )
ကြည့်ပါ။ သူ၏ပထမတပည့်တော်လေးဦးကို ခရစ်တော်သင်ကြားပေးသော ဒုတိယအရာမှာ စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးများအပေါ် ၎င်း၏တန်ခိုးတော်အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို Reformation Study Bible ( စာ-၂၉၀ ) က ဤသို့ဆိုပါသည်။
နတ်ဆိုးများသည် ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များဖြစ်ကြ၍ …. စာတန်၏အစေကိုခံကြသည်။ စာတန်၏ပုန်ကန်မှုတွင် ပူပေါင်းပါ ဝင်ကြပြီးနောက် သူတို့သည်လည်း ကောင်းကင်မှနှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရကြပါသည်။ စာတန်၏စစ်တပ် နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့သည် လှည့် ဖြားခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ( အသုံးပြု ) ကြပါသည်။ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်မှာ ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( ဧဖက် ၆း ၁၀-၁၈ )
တပည့်တော်သစ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ယေရှုက စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးအကြောင်းကို သိစေလိုသည်။ လူတစ်ဦးထဲက ယေရှုတွေ့ဆုံသောသူသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူဖြစ်ပါသည်။ King James ကျမ်းစာထဲက နတ်ဆိုးဟူသော ဂရိစကားလုံးကို “မာရ်နတ်” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ မာကု ၁း ၃၉ ကို ကြည့်ပါ။
“ဂါလိလဲပြည်အရပ်ရပ် တရားစရပ်တို့၌ တရားဟောလျက် နတ်ဆိုး တို့ကို နှင်ထုတ်လျက်နေတော်မူ၏။” ( မာကု ၁း ၃၉ )
သင်သည် ယေရှု၏တပည့်တော်တစ်ဦးဖြစ်လာလျှင် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော နတ် ဆိုးကို သတိထားရမည်။ နတ်ဆိုးက နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာ မျက်စိကန်းစေသည်။ နတ် ဆိုးကလည်း သင့်ကို နာကျင်စေရန်ကြိုးစားမည်။ ဘုရားကျောင်းသို့ နောက်ထပ်မလာနိုင် အောင်လည်း အားထုတ်မည်။ နတ်ဆိုးသည် သင့်အား ခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဖြစ်လာရန်လည်း အားထုတ်သည်။ ဒေါက်တာ Thomas Hale က ဤသို့ဆိုသည်။
နတ်ဆိုးစွဲခြင်းသည် စိတ်ဝေဒနာမဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ နား လည်ရပါမည်။ နတ်ဆိုး သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည် နတ်ဆိုး မင်းတည်းဟူသော စာတန်၏အစေခံများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် မကောင်းသောအမှုအရာများကို လုပ်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် လူ့အထဲသို့ရောက်လာကြသောအခါ ထိုလူတို့ကို စာတန်၏အ ကျဉ်းသား သို့မဟုတ် ကျွန်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ယေရှု ၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဤနတ်ဆိုးများကို အောင်နိုင်ပြီး လူကို လွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, မာကု ၁း ၂၁-၂၈ မှတ်စု)
လူတို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ မှော်အတတ်ပညာ၊ နှင့်ဘုရားသခင်ကို ဆန့် ကျင်သည့်အခြားနက်ရှိုင်းသောပုံပန်းသဏ္ဍာန်များဖြင့် နတ်ဆိုးစွဲတတ်ကြသည်။
“ကောင်းပါပြီ။” လူတစ်ဦးက “မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးဆောင်ပါ။ နတ်ဝိဇာအတတ်ပညာ တွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိ၊ ဤအရာအားလုံးကို ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါ” ဟု ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ အပြစ်ထဲ၌ ဤမျှလောက် မရောက်သည်အတွက် ဝမ်းသာပါသည်။ သို့ရာတွင် သင့်စိတ်နှလုံး တွင် “မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်း” ကို အလုပ် ( စွမ်းအားပေး ) နေသည်။ ( စာတန်၊ ဧဖက် ၂း ၂ )) ထို့ကြောင့် သင်၏မပြောင်းလဲသေးသောစိတ်နှလုံးကို စာတန်က စွမ်းအားပေးပါ သည်။ ထိုစာတန်မှာ “မိုဃ်းကောင်းကင်ကို အစိုးရသောမင်းဖြစ်ပါသည်။”
စာတန်လုပ်ဆောင်သည့် ဒုတိယအရာမှာ သင့်အား သမ္မာတရားမသိအောင် ကန်းစေ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၂ ကော ၄း ၃-၄ ကို နားထောင်ကြပါစို့။
“ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်၊ ဆုံး ရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။ ထိုသို့မ ယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား၏အ ရောင်သည် အလင်းကိုမပေးစေခြင်းဌါ၊ ဤလောကကို အစိုးရသော ဘုရားသည် သူတို့၏ဥာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏။” ( ၂ ကော ၄း ၃- ၄ )
“ဤကမ္ဘာကိုအစိုးရသောဘုရား” ဟူသောဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် “ဤခေတ်ကိုအစိုးရသောဘု ရား” ဟူသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်ထက် ပို၍ကောင်းပါသည်။ စာတန်သည် ဤခေတ်ကာလ ကို အစိုးရသည်။ စာတန်သည် “မယုံကြည်သောသူတို့” ၏စိတ်နှလုံးကို ကန်းစေသည်။ ခရစ် တော်၏ဧဝံဂေလိတရားနားမလည်ရသည့်အကြောင်းကို အံ့ဩပေလိမ့်မည်။ အဖြေကတော့ ရိုး ရှင်းပါသည်။ ဤခေတ်ကာလ ( စာတန် ) ကိုအစိုးရသောမင်းသည် သင်တို့စိတ်နှလုံးကို ကန်း စေပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် စာတန် သို့မဟုတ် နတ်ဆိုးများထက် တန်ခိုးပိုကြီးပါ သည်။ ထို့ကြောင့်သာ ယေရှုသည် ကပေရနောင်မြို့၌ နတ်ဆိုးကို အလွယ်တကူ နှင်ထုတ်နိုင် ပါသည်။ ခရစ်တော်က “သူ့အထဲက ထွက်ပါ” ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ နတ်ဆိုးသည်လည်း “သူအထဲကထွက်လေသည်။” ( မာကု ၁း ၂၅-၂၆ )
သင်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်နှင့် ယေရှု၏တပည့်တော်တစ်ဦးဖြစ် လျှင် သင့်အတွေးအခေါ်အပေါ် စာတန်၏ထိန်းချုပ်မှုကို ခရစ်တော်က ဆောင်ယူလိမ့်မည်။ Hippie က တချိန်က ဒေါက်တာ Hymers ကို “ဦးနှောက်ပြောင်းရွှေ့လိုသည်” ဟု ပြော ခဲ့သည်။ အဲဒါတော့ နည်းနည်း လွန်လွန်းသည်။ ထိုလူငယ်လေးဖြစ်လိုသည်မှာ သူ့အတွေးအ ခေါ်ကို ယေရှုအားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုလုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း မှာ ရိုးစင်းသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်- ကျမ်းစာအားဖြင့် သင့်စိတ်နှလုံးကို ဆေးကြောသည်။ ကျမ်းစာက “နှုတ်ကပတ်တော်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း” အကြောင်းကို ပြောသည်။ ( ဧဖက် ၅း ၂၆ ) ဆာလံ ၁၁၉း ၁၃၀ က ဤသို့ဆိုသည်။
“နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကိုပေး၍၊ မလိမ္မာသော သူတို့ကို လိမ္မာစေ၏။” ( ဆာလံ ၁၁၉း ၁၃၀ )
သင်သည် ယေရှု၏တပည့်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါသလား။ လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်းဖြင့် အစပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ဝပ်ဆိုက်တွင်တင်ထားသော ဒေါက်တာ Hymers ၏ တရားဒေသနာစာမူကို မအိပ်ခင် နေ့တိုင်း ဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝပ်ဆိုက်ဒ်ရှိ ပါသည်။ သင်သည် အိပ်ယာမသွားခင် ဒေါက်တာ Hymers ၏တရားဒေသနာကို တညတစ်ခါ လောက်ဖတ်ရှုလျှင် ကျမ်းပိုဒ်နှင့်တိုက်တွန်းချက်များက သင့်စိတ်နှလုံးကို သန့်ရှင်းစေမည်။ ထို့ အပြင် သင်သည် ယေရှုကို အလျှင်အမြန်ကိုးစားပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်။ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းနံပါတ် ၅ ၊ “သမ္မာကျမ်းစာမှန်ကန်သည်ကိုသိသည်” သီဆိုကြပါစို့။
သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားပေးပို့ကြောင်းသိသည်၊ ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၊
မှုတ်သွင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်၊ ကျမ်းစာမှန်ကြောင်းယုံ
ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံ၊ ကျွန်ုပ်ယုံ၊ ကျွန်ုပ်ယုံသည်၊
ခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ဘုရားမှုတ်သွင်း၊ ကျမ်းစာမှန်ကြောင်းယုံ
ကျမ်းစာတစ်ခုလုံး မှန်ကန်ကြောင်းယုံ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို အတွင်းနှလုံးသား၌ပေး၊
ကျွန်ုပ်အားတွေ့ရှိ၊ နှိမ့်သိမ့်မည် နေ့ရက်တိုင်း၊ အပြစ်ကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့။
ရန်သူများက ဝိညာဉ်တော်ကိုငြင်းပယ်သော်လည်း၊ သတင်းစကားဟောင်းသည့်တိုင် သစ်နေဆဲ
အချိန်နှောင်းပါစေ ချိုမြိန်နေဆဲ၊ သမ္မာကျမ်းစာ မှန်ကန်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
( “ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်” Dr. B. B. McKinney, ၁၈၈၆-၁၉၅၂ )
“ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်။” (Dr. B. B. McKinney, ၁၈၈၆-၁၉၅၂ ရေးစပ်သည်။)